Gịnị bụ Ndepụta Robinson na ihe ọ bụ maka, na-egbochi ịkpọ oku | Gam akporosis
Obi abụọ adịghị m na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị bịarutere ebe a ma na-agụ ọkwa a, n'oge ụfọdụ, natara oku site na ụlọ ọrụ na ebumnuche nke ree ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ma ọ bụ gwa gị nkwalite. Jirila obi ọma gwa onye ọrụ na ọrụ na ị nweghị mmasị, agbanyeghị, mgbe obere oge gachara, otu akụkọ ahụ ugboro ugboro. Ọ dị, enwere ngwa ọgụ megide omume a na-akpasu iwe, a na-akpọ ya Ndepụta Robinson.
The "Robinson List" na-mara dị ka "ewepu faịlụ" na ihu ọma, ọ bụ a nchekwa data mebere ndị na-achọghị ịnata mgbasa ozi site na email, oku ekwentị ma ọ bụ ozi, mana Ndepụta Robinson dị irè? Kedu ka ị ga - esi debanye aha ya? Kedu ihe ọzọ ị kwesịrị ịma gbasara Ndepụta Robinson? Na-esote, anyị ga-ewepụ obi abụọ gị niile.
1 Kedu ihe ndepụta ndị na-eji akwa ohi?
2 Kedu ka esi esonye ndepụta ndị robinson?
3 Ọ bụrụ na ha kpọọ m na m nọ na Ndepụta Robinson?
4 Na nkenke, ndepụta ndị robinson dị irè?
Kedu ihe ndepụta ndị na-eji akwa ohi?
La Ndepụta Robinson bụ a ndekọ emepụtara iji nyere ndị ọrụ na ndị ahịa aka izere ika na iyi egwu mgbasa ozi nke ụlọ ọrụ. Isi aha ya sitere na akwukwo ihe omuma a ma ama nke Daniel Dafoe dere na onye onye ozo ya abughi onye ozo karia Robinson Crusoe, onye di iche di iche nke di iche site na ndi ozo nke uwa mgbe ugbo nke ugbo agha ya mebiri ma mechie n'agwaetiti nke ọzara. Ya mere, "Ndepụta Robinson" na-anwa iji ihe atụ gosipụta ọchịchọ nke onye ọ bụla debanyere aha ya ịjụ mgbasa ozi niile na-abịa site na mba ọzọ. Ya mere, ọ bụ ndepụta mwepu mgbasa ozi.
Kedu ka esi esonye ndepụta ndị robinson?
Naps ruo okpueze na-anata oku na ozi si ụlọ ọrụ, na-abụkarị ụlọ ọrụ inshọransị na ndị ọrụ ekwentị na ndị na-ahụ maka ịntanetị, n'agbanyeghị na ị na-ekwusi ike nkwukọrịta mgbe nkwukọrịta na ị nweghị mmasị na onyinye ma ọ bụ nkwalite ha, mgbe ahụ ị kwesịrị isonye na ndepụta mwepu a mana otu esi eme ya?
Banye na Ndepụta Robinson bụ a nnọọ mfe usoro nke ga-ewe gị naanị ihe dịka nkeji ise na nke ị nwere ike ime ebe a. N'ezie, tupu ị na-eme nke a, ị ga-elebara usoro nke ihe mbido.
Nke mbụ, atụla anya na ọ ga-enwe mmetụta ozugbo. May nwere ike ịdebanye aha maka Lis Robinson ma nweta otu oku ahụ. Jụụ @, Ọ ga-ewe ọ dịkarịa ala ọnwa atọ tupu ya amalite ịmalite, ya mere, ị ka ga-ejigide obere obere ndidi.
Nke abuo, ndepụta mgbasa ozi a Ọ bụ naanị na ọ dị mma megide ụlọ ọrụ ndị ị na-enwebeghị mmekọrịta. Nke a pụtara na ọ bụrụ na ụlọ ọrụ X, nke gị na ya nwere nkwekọrịta ịntanetị ụlọ, na-akpọkarị gị ka ha nye gị ngwaahịa ha, ị ga-akpọtụrụ ha ma kwuo ka ha kwụsị ime ya.
Ihe ndekọ na Ndepụta Robinson bụ free na afọ ofufo. Maka ya nweta peeji a ma họrọ nhọrọ «Debanye aha dị ka nwa amaala». Dị ka oge niile, tupu ịme ya, ọ ga-adịrị gị mma ịgụ iwu ya mere enweghị mgbaghara.
Mgbe ah soro usoro ndị a ga-egosi na ihuenyo, ịhọrọ otu n'ime nhọrọ atọ dịnụ: ihe karịrị afọ 14 na-emechitere onwe ha, onye nlekọta nke onye na-erubeghị afọ 14, ma ọ bụ onye nnọchi anya nke onye nwụrụ anwụ. Tinye data nkeonwe gị ma ị ga-enweta nkwenye email na nzere gị nweta: aha njirimara (DNI ma ọ bụ NIE) na paswọọdụ ọnụọgụ. Cheta ikwenye site na ozi email a ka usoro ndebanye aha dechara.
Ozugbo imere ya, pịa na "Nweta" (n'akụkụ aka nri nke elu ihuenyo ahụ) yana, mgbe ịbatara aha njirimara na paswọọdụ gị, ị ga-enwe ike họrọ ụzọ ma ọ bụ ụzọ ị chọrọ ịkwụsị ịnweta mgbasa ozi. Nhọrọ ndị dịnụ anọ: site na ekwentị, ma ofu na mkpanaka, site na ozi SMS na MMS, site na post na site na email.
A na-arụ ọrụ nke ọ bụla n'ime ha n'otu n'otu, yabụ ị ga-etinye ozi kwekọrọ na ya, nwee ike ịhọrọ ha niile ma ọ bụ naanị ụfọdụ n'ime ha.
Anyị na-ekwusi ike na Ndepụta Robinson dị irè maka ụlọ ọrụ ndị ị na-enweghi mmekọrịta. N'agbanyeghị nke a, weebụsaịtị na-enyekwa a azụmahịa Finder nke mere na ị na-ezitere ha arịrịọ gị ma ọ bụrụ na ị nweelarị mmekọrịta mmekọrịta gị na ha. Otu ndụmọdụ: echefula debe ihe niile ị zigara dị ka ihe akaebe na ị rịọrọ ha ka ha kwụsị iziga gị mgbasa ozi ma ọ bụ ịkpọtụrụ gị.
Ọ bụrụ na ha kpọọ m na m nọ na Ndepụta Robinson?
Ọ bụrụ na ọnwa atọ agafeela kemgbe edere aha gị na Ndepụta Robinson, ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ndị gị na ha nwere nkwekọrịta gafere arịrịọ gị ịhapụ gị naanị gị, ị ka na-anata nkwukọrịta azụmahịa sitere na ụlọ ọrụ ahụ dị arọ nọ n'ọrụ, na mgbakwunye na ịbụ otu were iwe dị ka nwata nwoke ahụ na foto a dị n'elu, ị nwere ike tinye akwụkwọ mkpesa na thelọ Ọrụ Nchedo Data Spanish.
Nwere ike ime nke a ma site na gị ibe weebụ (ọ bụrụ na inwere mbinye aka na kọmputa), ebe ị ga-ahụkwa ozi niile ịchọrọ iji tinye akwụkwọ mkpesa gị, dị ka mmadụ, ma ọ bụ site na ịga ụlọ ọrụ dị na Calle Jorge Juan, Nke 6, 28.001 na Madrid, ma ọ bụ na nke ọ bụla n'ime otu windo nke obodo gị.
Na nkenke, ndepụta ndị robinson dị irè?
Ọfọn, nwoke, ma ọ bụ nwanyị, dị irè, ihe ekwuru na ọ dị ire, enwere ihe ole na ole na ndụ, ihe yiri ya na-eme na Ndepụta Robinson. Agbanyeghị, ee ahụ anyị nwere usoro iji chebe onwe anyị ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ eleghara anya na arịrịọ anyị ka ị ghara ịnata mgbasa ozi gị.
Anyị ga-eburu n'uche na na weebụsaịtị Robinson List n'onwe ya, ozugbo anyị banyere, a gwala anyị na "belata ọnụ ọgụgụ nke mgbasa ozi na-achọghị na ụlọ ọrụ" yana "can nwere ike izere oku azụmahịa site na ụlọ ọrụ ndị metụtara ya." Ọ na-esote nke ahụ o dighi uru otu nari percent, ma n'agbanyeghị nke ahụ, ọ bụ nnọọ irè na a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ikpe, na mgbakwunye na bụrụ ihe akaebe a pụrụ ịdabere na ya na ị rịọrọ ka ị ghara ịnweta mgbasa ozi nke ụlọ ọrụ nke ị na-enweghi mmekọrịta nkwekọrịta.
Otú ọ dị, A na - achọta nnukwu nsogbu na Iwu Organic na Nchedo Data (LOPD)) onye ederede ya na-egosi n'ụzọ doro anya na ụlọ ọrụ ọ bụla nwere ike iji data gị zitere gị mgbasa ozi n'okpuru naanị otu n'ime ihe abụọ a: na ị jiri aka gị nye ya (anyị na-eme ya mgbe anyị na-ekere òkè na asọmpi na asọmpi), ma ọ bụ edepụtara na ọdụ data ọha. . N'etiti ọha mmadụ ihe ọmụma na ịntanetị, data anyị dị n'ọtụtụ ebe na o siri ike ịkwụsị ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ndepụta Robinson
Anọla m na ndepụta Robinson ihe karịrị ọkara afọ ma ha na-akpọ m.
Ndị a bụ nọmba ikpeazụ ma ọ dị ka ha sitere na Vodafone na m nwere ha edepụtara na listi ahụ.
Sistemụ arụmọrụ gam akporo agbanwee itoolu
DOOGEE S60, ihe kariri smartphone di egwu